Ortana : ho any Ambolo ny tsidi-bohitra | NewsMada
Ortana : ho any Ambolo ny tsidi-bohitra
Tsy mitsahatra mampahafantatra toerana vaovao hatrany ny Ofisim-paritry ny fizahantany eto Analamanga (Ortana) amin’ireo tsidi-bohitra an-tongotra fanaony indroa isam-bolana. Ny asabotsy izao, ohatra, hihazo an’Ambolo ireo liam-baovao sy mankafy fanatanjahantena, indrindra ny dia an-tongotra.
Tsy lavitra fa any amin’ny 30 km mahery any avaratr’Antananarivo no misy ny tanànan’Ambolo. Tsy lavitra an’i Talata Volonondry izy ary heverina aza fa mifandray ara-tantara ireo toerana roa ireo. Manana ny mampiavaka azy ny tanàna, indrindra, noho izy maneho ny endriky ny ambanivohitra eto Analamanga.
Ankoatra ny lafiny ara-tantara sy ara-kolontsaina, anisan’ny mampiavaka an’Ambolo ny fambolena tongolo. Iray amin’ireo mpamatsy izany manerana ny faritra maro eto Madagasikara izy. Eo koa ny fanefena, sns. Mbola maro no azo ambara, saingy « hatsiro » kokoa izany rehefa fantarina ao anatin’ny dia an-tongotra.
Marihina fa mitotaly 11,5 km ny halaviran-dalana miandry ireo mpanao tsidi-bohitra, amin’ity indray mitoraka ity. Na izany aza, azo lazaina ho tsy dia mafy loatra ny dia.